नानोको हस्तान्तरण शुरू | गृहपृष्ठ
Home बजार नानोको हस्तान्तरण शुरू
नानोको हस्तान्तरण शुरू
साउन १४, काठमाडौं (अस) । टाटा मोटसको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले टाटा नानोको वितरण शुरू गरेको छ । शनिवार होटल याक एण्ड यतीमा आयोजित कार्यक्रमबीच निर्देशक सौर्यशमशेर जबराले नानोका ग्राहकलाई साँचो प्रदान गरे ।
३ सय ५० बुकिङमध्ये कार्यक्रममा १ सय ग्राहकलाई नानो वितरण गरिएको थियो । सो अवसरमा स्रि्रदीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शम्भुप्रसाद दाहालले नानोका सम्पूर्ण ग्राहकलाई हार्दिक बधाई दिए । कार्मक्रममा उपस्थित ग्राहक तथा अन्य दर्शकलाई नृत्यमार्फत मनोरञ्जनसमेत गराइएको थियो । नानो गत जुन २६ मा नेपालमा सार्वजनिक गरिएको थियो । बाँकी बुकिङको ‘डेलिभरी’ सिप्रदीका देशभरिका आधिकारिक वितरकबाट आज आइतवारदेखि गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
नानोको दोस्रो चरणको बुकिङ चाँडै शुरू गर्ने पनि कम्पनीले जानकारी दिएको छ । पहिलो चरणको बुकिङमा ग्राहकले उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाएको कम्पनीको भनाइ छ । विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सिप्रदीका १४ ओटा आधिकारिक शोरूममार्फत नानो हस्तान्तरण गरिनेछ । त्यस्तै, सिप्रदीका ९ ओटा सर्भिस सेण्टरमा यसको सर्भिसिङ गर्न सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
साउन, १४ झापा (अस) । मेची ट्रक व्यवसायी सङ्घले विगत ५ दिनदेखि मेची अञ्चलमा ढुवानी सेवा बन्द गरेपछि पूर्वी पहाडी जिल्लामा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ । सङ्घले लोड-अनलोड र स्थानीय निकायमा लाग्ने कर व्यापारीहरूले नै दिनुपर्ने माग राखेर १० गतेदेखि ढुवानी बन्द गराएको हो ।
स्थानीय निकायले विभिन्न सामग्रीमा कर लिने गरेको बताउँदै पटक-पटक माग पूरा गर्न ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कार्यान्वयन नभएपछि ढुवानी बन्द गरिएको सङ्घका अध्यक्ष कमलप्रसाद खरेलले बताए । ‘उद्योग वाणिज्य सङ्घ झापाको पहलमा वार्ताको प्रयास भइरहेको छ,’ उनल भने ‘हाम्रा मागको सम्बोधन भए ढुवानी तुरुन्त सुचारु हुन्छ ।’
बिर्तामोडका व्यवसायी निर्मल भट्टराईले वर्षायाममा केही वर्षदेखि यस्तो समस्या देखिने गरेको बताए । यसले व्यवसायीलाई मात्र नभई जनतालाई समेत समस्या पर्ने भएकाले ढुवानी चाँडै सुचारु हुने विश्वास व्यक्त गरे । ट्रक व्यवसायीहरूले रातो नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनमा पनि ढुवानी गर्न अवरोध गरेका छन् । झापाबाट वार्षिक करीब ४ हजार ५ सय ट्रिप ट्रक सामान ओसारपसार हुने गरेको छ ।
ट्रक व्यवसायीले ढुवानी भाडा पनि कम भएको बताउँदै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ बिर्तामोडका अध्यक्ष बलराम कार्कीका अनुसार बिर्तामोडदेखि ताप्लेजुङसम्मको भाडा ३ सय ५० रुपैयाँ प्रतिक्विण्टल रहेको छ । त्यस्तै, बिर्तामोडदेखि फिदिमसम्मको १ सय ९० रुपैयाँ प्रतिक्विण्टल र बिर्तामोडदेखि इलामसम्मको भाडा १ सय २० रुपैयाँ प्रतिक्विण्टल रहेको उनले जानकारी दिए ।
माछापुच्छ्रेको मोबाइल मनी सेवा
माछापुच्छ्रे बैङ्क लिमिटेडले आज आइतवारदेखि एमबीएल मोबाइल मनी (एमथ्री) सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यो सेवाअन्तर्गत ग्राहकले सन्देश पठाएर एउटा खाताबाट अर्कोमा रकमान्तरण गर्न, मोबाइलको बिल भुक्तानी गर्न, खाताको ब्यालेन्स थाहा पाउन, विदेशी विनियम दर थाहा पाउन सकिने बैङ्कले जानकारी दिएको छ । साथै, एमथ्री सेवाबाट स्कूल तथा कलेजको मासिक फी सन्देश पठाएर भुक्तानी गर्न सकिनेसमेत बैङ्कले बताएको छ । यो सुविधा बैङ्को नेपालभर रहेका शाखाबाट लिन सकिने बताइएको छ ।
हाल माछापुच्छ्रे बैङ्कले आफ्ना ३९ शाखा र ५७ ओटा एटीएम काउण्टरमार्फत सम्पूर्ण बैङ्किङ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको बताएको छ । बैङ्कले नेपाल र भारतका सबै एटीएम काउण्टरबाट रकम झिक्न सकिने तथा आवश्यकताअनुसार समान खरीद गर्न सकिने एमबीएल भिसा डेबिड कार्डको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निकट भविष्यमै अन्तरराष्ट्रियस्तरको क्रेडिट कार्डसमेत सञ्चालनमा ल्याउने बैङ्कले उल्लेख गरेको छ ।
पर्यटन र जलविद्युत्को विकास हुनुपर्छ : राष्ट्रपति
साउन १४, काठमाडौं (अस) । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपाली अर्थतन्त्रको आधार बन्दै गएको पर्यटन र जलविद्युत्को क्षमता विकासमा लाग्न आह्वान गरेका छन् । शनिवार राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा पर्यटन पत्रकार सङ्घ (जाट(नेपाल) सँगको भेटमा राष्ट्रपति यादवले अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार पर्यटन र जलविद्युत् भएको बताए । उनले यसका लागि जनशक्तिको विकास गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘नेपालको पर्यटन विकासका लागि जातीय र क्षेत्रीय राजनीति गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।
आन्तरिक पर्यटकका माध्यमबाट पनि पर्यटकीय क्षेत्रको विकास हुन सक्ने राष्ट्रपति यादवको धारणा छ । यसका लागि हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने नेपालीले एकले अर्को क्षेत्रको भ्रमण गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । शिक्षा, कृषि, जातीय जीवनशैली, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिने विचारसमेत यादवले राखेका छन् ।
भेटमा राष्ट्रपति यादवले शान्ति र संविधानको पक्षमा कलम चलाउन पनि पत्रकारलाई आग्रह गरे । ‘यो सबै नेपालीको चाहना हो,’ उनले भने । राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म देशमा आर्थिक विकास हुन नसक्ने उनले बताए । नेपालको पर्यटकीय सम्भावना रहेका हरेक पक्षलाई पत्रकारले उजागर गर्दै गएको जाट नेपालका अक्ष्यक्ष हरिराज जोशीले जानकारी गराएका थिए । उनले पर्यटन वर्ष२०११ को अभियानसँगै नेपालका पर्यटकीय विविधताबारे बताएका थिए ।
मध्यपश्चिममा ‘बीटीएल’ मोबाइल
टेलिटाइम इण्टरनेशनलको उत्पादन बीटीएल ब्राण्डका मोबाइल सेट मध्यपश्चिममा पुगेको छ । कम्पनीले दाङको घोराहीमा कार्यक्रम आयोजना गरी बीटीएलका आठ मोडलका सेट सार्वजनिक गरेको छ ।
मध्यपश्चिमाञ्चलमै पहिलोपटक दाङको घोराहीमा बीटीएल ब्राण्डको मोबाइलको विक्रीकेन्द्र राखिएको कम्पनीका पश्चिमाञ्चल तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र प्रबन्धक कमल अग्रवालले जानकारी दिए । कम्पनीले अहिले घोराहीस्थित विष्णु मोबाइल पसललाई विक्रीकेन्द्र बनाएको छ ।
हाल कम्पनीले उक्त केन्द्रबाट ‘जीडी-४४०’,’जीडी-४१२,’ ‘जीडी-५३०,’ ‘जीडी-२००,’ ‘जीडी-३०५,’ ‘जीडी-४०५’ र ‘जीडी-४१८’लगायत मोडलका सेट उपलब्ध गराउने भएको छ । दाङमा यी सबै मोबाइल सेट तथा यसको मर्मत पनि गरिने अग्रवालले बताए । यस्ता मोबाइल २ हजार १ सय ८० देखि ४ हजार ७ सय १९ रुपैयाँसम्ममा खरीद गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।
बाजरमा उपलब्ध न्यून मूल्यको मोबाइल सेटमा वायरलेस एफएम रेडियो, २ जीबी मेमोरी, अडियो प्लेयर, रेकर्डरलगायत सुविधा रहेका छन् । त्यस्तै, उच्च मूल्यको सेटमा १ दशमलव ३ मेगापिक्सलको डबल क्यामरा, २ जीबी मेमोरी, डबल सिम, एफएम, अडियो भिडियो प्लेयर, यूभी च्याटिङ, लामो समयसम्म टिकाउ रहने ब्याट्रीलगायत सुविधा रहेको अग्रवालले जानकारी दिए । बीटीएसका मोबाइल सेटमा जीएसएम सिम लाग्छ । अन्य मोबाइलभन्दा आकर्षक दाबी गरिएका उक्त सेटमा १ वर्षको वारेण्टी कम्पनीले दिएको छ । घोराही स्थित विक्री केन्द्रबाट राप्तीका रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्यूठान र दाङमा सो ब्राण्डका मोबाइल सेट वितरण गरिने र आवश्यक भए अन्य अञ्चलमा पनि विक्रीकेन्द्र राखिने अग्रवालले बताए ।
नवजीवनको नाफा साढे १० करोड
नवजीवन सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष०६७/६८ मा रू. ३ करोड ९७ लाख सञ्चालन मुनाफा कमाएको छ । संस्थाले उक्त अवधिमा रू. ६९ करोड ८६ लाख निक्षेप सङ्कलन तथा रू. ६२ करोड ३० लाख लगानी गरेको नवजिवनका निमित्त महाप्रबन्धक चेतराज पनेरुले बताए ।
नवजिवन सहकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट सीमित कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त नेपालकै पहिलो संस्था भएको उनले बताए । अधिकृत पूँजी रू. ५ करोड रहेको यससंस्थाको जारी पूँजी रू. १० करोड रहेको छ । हाल संस्थाको चुक्ता पूँजी रू. ५ करोड ८७ लाख पुगेको उनले जानकारी दिए । संस्थाले कृषि, सवारी, साना तथा मझौला उद्योग र विपन्न वर्गमा कर्जा प्रबाह गरेको छ । उनका अनुसार कृषिमा १८ प्रतिशत र साना तथा मझौला उद्योगमा १७ प्रतिशत लगानी रहेको छ । हाल सहकारीका ९ हजार ७ सय १४ जना शेयर सदस्य छन् ।
महिलाको सक्रियतामा बिजुली
साउन १४, बेनी (अस) । म्याग्दीको कुहू गाविस ६ तुसारेपानीमा महिलाहरूको सक्रियतामा बिजुली बलेको छ । मनकामना आमा समूहको पहलमा १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लागतमा निलोपहराको खोलाबाट पाँच किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरिएको हो ।
देशविदेशमा रहेका तुसारेपानीवासी र आमा समूहको आर्थिक सहयोग तथा जनश्रमदानमा विद्युत् उत्पादन शुरू भएपछि ५८ घरपरिवार लाभान्वित भएको जलविद्युत् निर्माण समितिका अध्यक्ष रुकबहादुर रोकाले बताए । दिउँसो खानेपानीका लागि प्रयोग हुने पानी रातको समयमा विद्युत् उत्पादनका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए । बुधवारदेखि बिजुली बलेपछि विद्यार्थीलाई पढ्न र घरेलु काम गर्न सुविधा पुगेको स्थानीय गोपाल केसीले अभियानलाई बताए । मनकामना आमा समूहको ५ लाख, स्थानीयवासीको ८ लाखका साथै काठमाडौँ , पोखरा र विदेशमा बस्ने गाउँलेको आर्थिक सहयोगमा बिजुली बलेको हो ।
कमलामाईमा सुरक्षा भत्ता लिने बढे
साउन १४, सिन्धुली (अस) । कमलामाई नगरपालिका कार्यालय सिन्धुलीमार्फत सुरक्षा भत्ता लिनेको सङ्ख्या बढेको छ । आर्थिक वर्ष०६७/०६८ मा गतवर्षको तुलनामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको सङ्ख्या १ सय २४ ले बढेको कार्यालयले बताएको छ । हाल कमलामाई नगरपालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको सङ्ख्या १ हजार ९ सय ८४ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष०६६/०६७ मा भत्ता लिनेको सङ्ख्या १ हजार ८ सय ६० रहेको थियो । सरकारले ७० वर्षमाथिका लाई ज्येष्ठ नागरिक, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ दलित नागरिक, ६० वर्षमाथिका एकल महिलालाई मासिक ५ सय, पूर्ण अपाङ्गलाई १ हजार र आंशिक अपाङ्गलाई ३ सय रुपैयाँ सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसैगरी सरकारले यस वर्षदेखि सम्पूर्ण एकल महिलालाई भत्ता उपलब्ध गराउने भएपछि चालू आर्थिक वर्ष०६८/०६९ मा पनि यो सङ्ख्या बढ्ने कार्यालयका समाजिक विकास शाखा प्रमुख उद्धव थापाले जानकारी दिए ।
कम्प्युटरलाई गुरु बनाउने अभियानमा मिदाज
साउन १४, बुटवल (अस) । बुटवलको मिदाज एजुकिट कम्प्युटरका माध्यमबाट पाठयक्रमअनुसारको शिक्षा प्रदान गर्ने सफ्टवेयरको विस्तारमा जुटेको छ । विज्ञानको विकाससँगै आएको नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट समयसापेक्ष शिक्षा दिने उद्देश्य राखेको मिदाजले बताएको छ । हाल रूपन्देही, कपिलपस्तु, पाल्पालगायत जिल्लामा उद्देश्यअनुसारको काम थालिसकेको सो संस्थाका विष्णु कुँवरले बताए । यस्तै औपचारिक शिक्षाको स्कूल प्याकेज तथा प्रशासनिक, लेखा र पाठयक्रमका अन्य तीनओटा प्याकेज कार्यक्रममार्फत शिक्षा र प्रविधिलाई जोड्न आफूहरू लागेको मिदाजकै राजु बानियाँले जानकारी दिए । दशैंलगत्तै देशका अन्य भागमा पनि मिदाजले विशेष अभियान सञ्चालन गर्न लागेको पनि बताइएको छ ।
करीब ६ महीनाको अवधिमा बुटवलका केही कलेज तथा विद्यालयले मिदाजको सेवा लिएको मिदाज सफ्टवेयरका आधिकारिक विक्रेता ब्राइटफ्युचर सफ्टवेयर टेक्नोलोजीका सञ्चालक लक्ष्मण गौतमले बताए । मिदाजले तयार पारेको स्कूल प्याकेज सफ्टवेयरको मूल्य रू. १३ हजार २ सय छ । कुँवरका अनुसार प्रशासनिक, लेखा र पाठयक्रम प्याकेजको मूल्य भने क्रमश: ४५ हजार, ४० हजार र ५० हजार रहेको छ ।
अखाद्य वस्तुको अनुगमन
साउन १४, पर्वत (अस) । बजारमा उपभोग्य वस्तु विक्रीबारे जानकारी लिन पर्वत सदरमुकाम कुश्मामा अनुगमन थालिएको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय कास्कीका प्रमुख शम्भुकुमार झासहितको टोलीले गरेको अनुगमनमा १५ ओटा पसलमा अखाद्य वस्तु भेटिएको थियो ।
कुश्मा बजारका खाद्य डिपोको अनुगमन क्रममा म्याद नाघेका चियापत्ती, भुजा, बेसार, हर्लिक्सलगायत सामान बरामद गरी नष्ट गरिएको थियो । टोलीले रिप्याकिङ गरिएका ४०/५० थान चामलका बोरासमेत जफत गरेको छ ।
कावेलीमा पुल निर्माण
साउन १४, पाँचथर । मेची राजमार्गअर्न्तगत पाँचथर र ताप्लेजुङ जोड्ने कावेली खोलामा ७५ मिटर लामो ‘मोटरएवल’ पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । पाँचथरको सीमा नागी गाविस र ताप्लेजुङको इवा गाविस जोड्ने उक्त पुल निर्माण भएपछि ताप्लेजुङ जाने र त्यहाँबाट फर्कने सवारी साधनलाई सजिलो भएको छ ।
विश्व बैङ्कको ७ करोड १ लाख ८१ हजारको सहयोगमा निर्माण शुरू गरिएको भए पनि यसको निर्माणमा कुल ७ करोड १ लाख ७४ हजार रुपैयाँ लागेको पूर्वाञ्चल सडक डिभिजन कार्यलयका इञ्जिनीयर अरुण कर्णले जानकारी दिए । उक्त पुलबाट दैनिक ठूला तथा साना गरी करीब २ सयको हारहारीमा सवारी ओहोरदोहोर गर्छन् ।